Mitaky evolisiona ny fanarenana ny dia vaovao
Janoary 24, 2022 0 Namaky 3 aho
Ny fitakiana sy ny fanirian'ny mpandeha vaovao dia misy fiantraikany amin'ny hotely satria izy ireo dia mametraka laharam-pahamehana stratejika ary mifantoka amin'ny loharanon-karena sy fampiasam-bola mba hanatanterahana tsara ny filan'ny vahiny. Amin'ny 2022, ny fananganana indray ny mpiasa, ny fampihenana avo roa heny ny faharetana, ary ny famerenana indray ny tsy fivadihana dia ho sehatra manan-danja ho an'ny hotely izay te hifanaraka amin'ny mpandeha vaovao.
Fanarenana ny mpiasan'ny hotely ho an'ny vanim-potoana vaovaon'ny dia
Ny fanamby amin'ny mpiasa dia nanakana ny fiverenana amin'ny ara-dalàna amin'ny hotely maro manerana ny firenena, ka sarotra ny mamaly ny fitomboan'ny fangatahana. Raha saika ny indostria rehetra no niaina tsy fahampian'ny asa tamin'ny taon-dasa, ny tsy fahampiana dia tena mafy tokoa tao amin'ny hotely noho ny fandroahana ny areti-mifindra sy ny onjan'ny olona miala an-tsitrapo, matetika noho ny fahafahana amin'ny indostria hafa.
Ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny mpikambana ao amin'ny AHLA tamin'ny Oktobra 2021 dia mampiseho ny faharatsian'ny toe-draharaha ankehitriny.
Saika ny rehetra (94%) namaly no nilaza fa tsy ampy mpiasa ny trano fandraisam-bahiny, anisan'izany ny 47% izay milaza fa tsy ampy mpiasa izy ireo. Ankoatr'izay, 96% amin'ireo mpamaly dia manandrana manakarama nefa tsy afaka mameno toerana misokatra.
Raha mbola mitohy amin'ny lalana mankany amin'ny fanarenana ny indostrian'ny hotely amin'ny taona 2022, ny fanamboarana ny dobo talenta dia ho zava-dehibe amin'ny fanompoana ny filan'ny mpandeha vaovao. Rehefa dinihina tokoa, ny
Ny indostria dia vinavinaina hifarana amin'ny taona 2022, nidina 166,000 ny mpiasa raha oharina tamin'ny taona 2019.37
Ny fandraisana mpiasa dia ho sarotra kokoa amin'ny indostria maro omena
ny fifaninanana mafy.
Ny vaovao tsara dia misy ny fahafahana misarika sy mitazona mpiasa amin'ny vaovao
fomba. Izany dia mety midika hoe manorina amin'ny ezaka efa misy mba hanabeazana ny olona momba ny zava-drehetra
lalan'ny asa mampientam-po ary manome fampivoarana asa sy fanofanana fahaizana mifandraika amin'izany.
Ireo kandidà amin'izao fotoana izao dia miahy ny lalan'ny asa, ny fandaminana ny asa miovaova, ary ny fanofanana fahaiza-manao izay mitazona azy ireo ho azo ampiasaina amin'ny ho avy. Ny trano fandraisam-bahiny ihany koa dia manana fahafahana hanamafisana ny fahasamihafan'izy ireo sy ny fomba fampidiran-dresaka, fampiroboroboana ny asa ho an'ny olona miloko sy vehivavy ary miantoka fa ny mpiasa amin'ny ambaratonga rehetra dia samy hafa tahaka ny vahiny.
Mitombo avo roa heny ny faharetan'ny olona sy ny planeta
Araka ny tadiavin'ny mpandeha vaovao raharaham-barotra miaraka amin'ireo marika hotely izay mifanaraka amin'ny tanjon'izy ireo manokana, ny fanoloran-tenan'ny hotely amin'ny faharetana dia hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Ny fanadihadiana eran-tany vao haingana momba ny mpandeha dia manambara fa ny sehatra telo voalohany heverin'ny mpanjifa fa tokony hifantohan'ny orinasa fitsangatsanganana amin'ity sehatra ity dia ny fampihenana ny entona entona karbônina, ny fanodinana ary ny fampihenana ny fako sakafo. Liana ihany koa izy ireo amin'ny hetsika mikasika ny plastika ampiasaina tokana, ny fako rano ary ny fitsitsiana herinaratra.
Miaraka amin'ireo tompon'ny hotely mbola mahatsapa ny faneren'ny toe-karena misy areti-mifindra sy ny filàna laharam-pahamehana ny fandaniana amin'ny fototry ny fihazonana ny fandraharahana, ny fampiasam-bola amin'ny faharetana dia mety ho toy ny laharam-pahamehana kely kokoa.
Na izany aza, ny hotely dia tsy voatery manao safidy eo amin'ny "manao ny tsara" sy ny fanaovana ny zavatra malina ara-bola raha ny momba ny faharetana.
Ny tanjona dia ny hampifanaraka ny fampiasam-bola maharitra amin'ny fiverenana ara-bola mba hihoatra ny vidin'ny fanarahan-dalàna. Ny fampiasam-bola amin'ny fandaharan'asa miray hina, mifampiresaka mazava ary manome fiverenana ara-bola mivaingana ho an'ny tompony — na amin'ny alàlan'ny famolavolana trano fandraisam-bahiny maitso, ny fampivoarana angovo amin'ny alàlan'ny rafitra fanorenana, na ny fandraisana anjara amin'ny fifanarahana fividianana herinaratra azo havaozina amin'ny anaran'ny franchisee — dia ho lasa fitsipika kokoa. afa-tsy ny maningana satria mirona mankany amin'ny marika manome lanja ny faharetana sy ny andraikitra ara-tsosialy ny mpandeha vaovao.
Famerenana ny tsy fivadihana mihoatra ny teboka
Ny fandaharan'asa momba ny tsy fivadihana izay mikendry ny filan'ny mpandeha ara-barotra ary mifototra indrindra amin'ny isa voaangona dia tsy dia ilaina loatra. Ny imperative izao dia fandaharana ho an'ny olona izay mandehandeha kely kokoa sy ho an'ny fialam-boly. Ohatra iray: Tamin'ny Septambra 2021, 41% ny mpandeha tany Etazonia no nitsidika fianakaviana sy namana, ary 41% no nanao vakansy. 8% monja no nanao dia raharaham-barotra, ary 6% no nandeha tany amin'ny fivoriambe na fihaonambe mifandraika amin'ny asa.
Ny zava-misy dia tsy mifanaraka amin'ny fitondran-tenan'ilay mpandeha vaovao ny tetika momba ny tsy fivadihana mifototra amin'ny fahamaroan'ny dia sy ny tontolo fitakiana voasakana. Ary na dia mihamitombo aza ny fangatahana ao anatin'ny volana sy taona ho avy, dia hiova tanteraka ny fifangaroan'ny fitsangatsanganana ara-barotra sy fialamboly, ary ny programa momba ny tsy fivadihana dia tokony hifanaraka amin'ny fitondran-tenan'ireo mpandeha amin'izao fotoana izao mba handraisana anjara amin'izy ireo.
Ny trano fandraisam-bahiny izay mamerina ny fandaharan'asa mahatoky amin'ny fihetsehan'ny lamina fitakiana vaovao no toerana tsara indrindra hananganana ny tsy fivadihana. Midika izany fa ny kaonty amin'ny maodely traikefa, modely angon-drakitra ary modely fandraharahana. Ireo faritra rehetra ireo dia miara-miasa amin'ny famoronana fandaharan'asa momba ny tsy fivadihana mifototra amin'ny filan'ny olombelona ary manohana ny lafiny fampandehanana amin'ny fanaterana azy ireo.
More on: Hotel | mpiasa | Etazonia | maharitra
Ny marary amin'ny havokavoka dia mahazo tombony amin'ny fitaovana fanaraha-maso marary lavitra Etazonia|
Ny marary voalohany nalaina tamin'ny fitsaboana vaovao ho an'ny Karsinoma Hepatocellular Advanced Etazonia|
Ny FDA dia mankasitraka ny fitsaboana voalohany amin'ny aretin'i Wilson tao anatin'ny 5 taona mahery Etazonia|
Previous Ilay Mpizahatany Vaovao: Mitady tanjona rehefa misokatra indray izao tontolo izao
Manaraka Nampitandrina ny Amerikanina ny hisoroka ny fitsangatsanganana any Rosia ankehitriny